Duty Manager | Best Western Chinatown Hotel (Yangon) ﻿
Duty Manager M (.)
21.11.2018, Full time , Hospitality / Hotel
Company: Best Western Chinatown Hotel (Yangon)
Best Western Chinatown Hotel (Yangon)Myanmar's commercial capital, you are invited to relax and enjoy the distinctive charms of this captivating city. Best Western Chinatown Hotel guaranteesarestful stay with services and amenities designed to make the hotel feel likea'home away from home'. Our professional and friendly staffs are committed to ensuring that your stay is both enjoyable and comfortable, while our ideal location and complimentary wifi will ensure that you are well connected at all times. .
•	Hotel Front Office လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။
•	Duty Manager ရာထူးနှင့်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
•	English စကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။
Work location No.127-137, Anawrahta Road, Comer of Lanmadaw Street, Laltha Township
Job Function: Duty Manager
Job posted: 21/11/2018
Best Western Chinatown Hotel (Yangon)
185 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	Hotel Front Office လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။ •	Duty Manager ရာထူးနှင့်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
Myanmar's commercial capital, you are invited to relax and enjoy the distinctive charms of this captivating city. Best Western Chinatown Hotel guaranteesarestful stay with services and amenities designed to make the hotel feel likea'home away from home'. Our professional and friendly staffs are committed to ensuring that your stay is both enjoyable and comfortable, while our ideal location and complimentary wifi will ensure that you are well connected at all times.
General Worker M (.)
200 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ဟင်းချက်နည်းပညာ လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ •	စည်းကမ်းရှိသူ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာ လုပ်ကိုင်နို ...
Commis III M (.)
•	ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ •	ဟင်းချက်နည်းပညာလေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ •	စည်းကမ်းရှိသူ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည� ...
Chef DePartie M (.)
•	ဥရောပအစားအစာ ကျွမ်းကျင်စွာချက်ပြုတ်နိုင်သူ •	နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ သန့်ရှင်းမှု၊ စည်းကမ်းရှိမှုများကို ဦးဆောင်နိုင်သူ •	ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်စည်း ...
M & E Technician M (.)
•	Air-con ရေ၊ မီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူနှင့်လက်သမားကျွမ်းကျင်သူ •	ရိုးသားကြိုးစားသူ •	တိကျမှန်ကန်သော Report များအား အချိန်မှီတင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Bell Boy M (.)
•	Bell Boy လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ •	စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
Waiter M (.)
•	English ဘာသာစကားတက်ကျွမ်းပြီး Hotel Service သင်တန်းဆင်းများဦးစားပေးမည်။ •	စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
F & B Supervisor M (.)
•	English ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ပြီး Supervisor လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများဦးစားပေးမည်။ •	စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work Leader Shift Skill ရှိရမည်။
Public Area Supervisor M (.)
•	English ဘာသာစကားတက်ကျွမ်းသူများဦးစားပေးမည်။ •	စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work Leader Shift Skill ရှိရမည်။
Housekeeping Room Attendant M (.)
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	English ဘာသာစကားတက်ကျွမ်းသူများဦးစားပေးမည်။
Housekeeping Floor Supervisor M (.)
•	Hotel ပိုင်းဆိုင်ရာ HK management အတွေ့အကြုံ(၂)အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	English ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ပြီး Computer အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တိကျမှန်ကန်သော Report များအား အချိန်မှီစီစဉ်တင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Team Work Leader Shift Skill ရှိရ� ...
Night Manager M (.)
•	Night Manager လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။
•	လုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲ၊ အရောင်းမြှင့်တင်၊ ဝင်ငွေတိုးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ •	Sales Target နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ •	Travel Agents Company များနှင့်အဆက်အသွယ်ကောင်းရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
Duty Manager Hospitality & Tourism Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Best Western Chinatown Hotel (Yangon) Hospitality & Tourism jobs Hospitality & Tourism jobs Duty Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(4876)
Sustainable Banking Engagement Manager M/F (1)